के महामारीमा होटलमा बस्नु सुरक्षित हुन्छ ?Main Samachar
के महामारीमा होटलमा बस्नु सुरक्षित हुन्छ ?
२० कार्तिक २०७७, बिहीबार २०:२८ प्रकाशित
कोरोनाभाइरसको महामारी चलिरहेका बेला होटलमा बस्नु सुरक्षित होला की नहोला ? अहिले धेरै मानिसलाई यो प्रश्नले सताइ रहेको पाइन्छ ।
अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा निवारण केन्द्रले यस बारेमा धारणा सार्वजनिक गर्दै स्पष्ट पारेको छ । उसका अनुसार कोरोनासँग सुरक्षित रहनका लागि होटलमा बस्नु भन्दा घरमा बस्नु नै सुरक्षित हुनेछ ।
“यदी तपाई यात्रामा हुनुहुन्छ भने होटलमा बस्नु पर्ने बाध्यता हुनसक्छ,” केन्द्रले भनेको छ । त्यसैगरी संयुक्त रुपमा भाडाको घरमा वा फ्ल्याटमा बस्नुहुन्छ भने पनि घरमै बस्नु भन्दा होटलमा बस्नु ठिक हुने केन्द्रको ठहर छ ।
तर आफ्नै घर हो, फ्ल्याट पनि छुट्टै छ भने घरमै बस्न सुझाव दिने गरेको केन्द्रका अधिकारीहरुले बताएका छन् । सँगसगै खाने, सँगसगै सुत्ने वा शौचालय पनि साझा हुने होटल तथा लजहरु सवैभन्दा असुरक्षित हुने उनीहरुको भनाई छ ।
होटलमै बस्नु परेमा वा भाडाका ठाउँहरुमा बस्नु परेमा कम्तीमा ७२ घण्टाभन्दा पछाडि कोही बसेको छैन भन्ने सुनिश्चित गरेर मात्रै बस्न पनि केन्द्रका चिकित्सकहरुले सुझाव दिएका छन् ।
त्यसरी बस्नु अगाडि पर्याप्त सेनिटाइजेसन गर्न वा किटाणु मार्ने उपायहरु गर्न क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका सङ्क्रमण विज्ञ डा नतास्चा टुज्नीकले जोड दिए।
उनले धेरै छोइने तथा प्रयोग हुने ढोका, झ्याललगायतका ठाउँमा सावुन पानी वा अन्य सावुनजन्य पदार्थले सफा गर्न वा कोठामा हावा खेल्ने बनाउन पनि सुझाव दिए ।
भाडामा बसिएका कोठामा पनि होटलका कोठा भन्दा धेरै सफा, सुरक्षित र हावा धेरे खेल्ने हुन सक्ने पनि उनको भनाई छ । होटलमा बस्दा सवै सुरक्षाका उपायहरु के कत्तिको अवलम्बन गरिएको छ, सरसफाइको प्रक्रिया के छ, सामाजिक दुरी कायम गरिएको छ की छैन, साझा ठाउँ तथा सामग्रीहरुको प्रयोग भएको छ की छैन जस्ता विषयमा पनि ख्याल गर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारद्वारा बजेट अधिवेशन आह्वान
जो दोहोरिएर चुनाव लड्दा पराजित भए
दिउँसो मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षा हुने
Memphis Chat , Free online dating
संसद बैठक सुरु, विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल जारी
काठमाडौंमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा १२ जना पक्राउ
गणनास्थलमा प्रतिनिधिनको नक्कली कार्ड बनाएर छिरेका दुईजना पक्राउ
एमालेका १० हजार ६०९ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित स्थानीय निर्वाचानमा
यस्तो छ भरतपुर महानगरपालिकाको पछिल्लो अपडेट
दुई वडामा एमाले प्यानलै विजयी चितवनमा
बालेन शाह केशव स्थापितभन्दा दोब्बर मतले अगाडि
अग्रता बढाउँदै लगे बालेनले काठमाडौं महानगरपालिकामा
राप्रपाको हैसियतमा सुधार, अहिलेसम्म जित्यो १८ वडाध्यक्ष
नेपाल र भारतबीच ६ वटा समझदारी तथा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर
पुन: रेनुले बढाइन् मतान्तर भरतपुरमा
महत्वपूर्ण लिंकहरु Select Category adult sex chat Android Banner Best Dating Website Bitcoin News Bitcoin Trading blog Crypto News File di sistema di Windows 11 Forex Education How Much Does A Mail Order Bride Cost mail order brides Payday Loans Payday Loans Online Uncategorized Windows 10 DLL Dateien Форекс Обучение अन्तराष्ट्रिय अन्तर्वार्ता अर्थतन्त्र आश्चर्य खेलकुद जीवनशैली तस्बिर बोल्छ प्रदेश प्रवास फिचर भिडियो मनोरञ्जन राजनीति रोजगार विचार विविध समाचार समाज सुचना प्रविधि स्वास्थ्य / जीवनशैली